पत्यारै नलाग्ने किसमिसको पानीका फाइदा, यो पिउँदा जरैदेखि निर्मुल हुन्छन् यी रोग – Sandesh Press
January 1, 2021 124
१) हरेक बिहान किसमिस पानीपिउनाले विशेषतःपेट सम्बन्धी रोगबाट फाइदापुर्याउँछ । यसको नियमित सेवनले कब्जीयत र एसिडिटीबाटसमेत छुटकारा पाउन सकिन्छ । यसले पाचन प्रणाली राम्रो बनाउँछ । साथै थकानबाट राहतपनि दिन्छ।
२) अनियमित र बढेको कोलेस्ट्रोल लेवलका कारण बिभिन्न स्वास्थ्य समस्या भोग्नु पर्दछ । तर किसमिसको पानी पिउनाले यस प्रकारको समस्याबाट राहत मिल्दछ। किसमिस पानी हाम्रो शरीरमा ट्राईग्लिसेराइड्सको स्तर कमगर्न उपयुक्त मानिन्छ।
४) किसमिस पानी अमाशयमा रस बनाउन असरदार मानिन्छ। यसको नियमित सेवनले मानिसको आमाशय स्वस्थ रहन्छ। शरीरमा मेटाबलिज्मको स्तर नियन्त्रित हुने गर्दछ
Prevमन्त्रालयले भर्खरै जारी गर्यो यस्तो सुचना ! सम्पुर्ण बिद्यार्थीले पढ्नै पर्ने !
Nextपारसको जन्मदिनमा उनकै प्रिय मानिसले दिए यस्तो अनौठो शुभकामना